PacketZoom's Mobile Expresslane CDN wuxuu la shaqeeyay Amazon Cloudfront | Martech Zone
PacketZoom's Mobile Expresslane CDN wuxuu lashaqaystay Amazon Cloudfront
Talaado, Febraayo 6, 2018 Arbacada, February 7, 2018 Douglas Karr
Xirmada, shirkad hagaajineysa waxqabadka barnaamijka moobiilka iyadoo loo marayo teknolojiyadda isku-xirka moobiilka, ayaa ku dhawaaqday iskaashi ay la leedahay Amazon CloudFront in loogu daro CloudFront adeegga PacketZoom ee Mobile Expresslane. Xalka la duubay wuxuu siiyaa horumariyeyaasha barnaamijka moobiilka barnaamijkii ugu horreeyay iyo midka moobiilka ee dhammaan baahiyaha waxqabadka shabakadooda.
Waa moobilkii ugu horreeyay ee hal-hal ah oo wax ka qabta dhammaan baahiyaha waxqabadka ee barnaamijyada moobiilka - cabbiraadda, waxqabadka mayl-kii ugu dambeeyay, iyo waxqabadka-maylka dhexe. Waxyaabaha ugu muhiimsan ee adeegga waxaa ka mid ah:
PacketZoom's Mobile Expresslane waxay xawaareysaa barnaamijyada moobiilka illaa 3x iyo badbaadiyaa ilaa 90% ka goynta shabakada loogu talagalay daabacayaasha barnaamijka oo ay ku jiraan Glu, Sephora, Photofy, Upwork iyo kuwa kale.
Iyadoo lala kaashanayo CloudFront's Web CDN, PacketZoom iyo Amazon waxay noqdeen kuwa ugu horreeya ee bixiya xalka isku-xirnaanta moobiilka dhammaadka-dhamaadka.
Si wada jir ah oo ay ula socdaan PacketZoom xawaarihii ugu dambeeyay ee moobiilka, macaamiisha waxay la kulmaan xalka ugu wanaagsan ee gaarsiinta moobilka moobilka
Macaamiisha PacketZoom ee horeyba uga faa'iideysanaya Amazon CloudFront dalal kala duwan waxaa ka mid ah Glu Mobile, Upwork, Photofy (US), Perfect Corp (Asia), iyo Belcorp (Latin America).
PacketZoom waa hogaamiyaha goobta dardar galinta barnaamijka mobilada iyadoo ay la socoto teknolojiyaddiisa Mobile Expresslane, taasoo xawaareysa barnaamijyada moobiilka ilaa 3x waxayna badbaadineysaa ilaa 90% ka goynta shabakadda ee daabacayaasha barnaamijyada moobiilka oo ay ku jiraan Glu, Sephora, Photofy, Upwork iyo kuwa kale. Xirmada waxay hagaajineysaa khibrada isticmaale ee barnaamijyada moobiilka iyadoo la baabi'inayo isbaarooyinka waxqabadka ee moobiilkii ugu dambeeyay. Qalabkeeda moobiilku wuxuu bixiyaa qalab dhammaystiran, dhammaad illaa dhammaad ah oo loogu talagalay Maareynta Waxqabadka iyo Maareynta Barnaamijka Moobilka (APMO).
Xalka Amazon ee CloudFront Web CDN wuxuu leeyahay saamiga ugu weyn ee suuqyada ee daabacaadda barnaamijyada moobiilka. Waxay si ammaan ah u bixisaa waxyaabaha iyada oo kufiican gaarsiinta bartamaha. Si wada jir ah ula socodsiinta xawaareynta maylka ee ugu dambeeya ee PacketZoom, macaamiisha waxay la kulmaan xalka ugu wanaagsan ee gaarsiinta moobilka.
Waxaan ku faraxsanahay inaan bixinno kan ugu fiican labada adduun: Amazon CloudFront - Web-ka ugu caansan ee CDN ee ka dhex shaqeeya horumarinta moobiilka - oo ay weheliso PacketZoom Mobile Expresslane - oo ah xalka dardargelinta barnaamijka moobiilka. Waxay noo ahayd horumar wax soo saar dabiici ah, maadaama inbadan oo ka mid ah macaamiisheennu ay mar horeba adeegsanayeen CloudFront. Shlomi Gian, Maamulaha Guud ee PacketZoom
Ku saabsan PacketZoom
PacketZoom wuxuu dib-u-qeexaa waxqabadka moobiilka iyadoo loo marayo tikniyoolajiyadda isku-xirka barnaamijka. Loogu talagalay si gaar ah barnaamijyada moobilka hooyo, barnaamijka moobiilka ee PacketZoom wuxuu awood siinayaa horumariyeyaasha barnaamijyada moobiilka si ay ugu fiicnaadaan waxqabadka barnaamijka moobiilka waqtiga dhabta ah. PacketZoom waxay hagaajineysaa khibrada isticmaale ee barnaamijyada moobiilka iyadoo la baabi'inayo isbaarooyinka waxqabadka ee moobiilkii ugu dambeeyay, xawaareynta xawaaraha soo dejinta illaa 3x, badbaadinta illaa 90% ee kalfadhiyada iskuxirka TCP iyo hoos u dhigista kharashyada CDN Wixii macluumaad dheeraad ah booqo Xirmada
Tags: amazon Cloudfrontxajincdndaruurahaxabagta moobiilkaxirmocorp kaamil ahsawirshaqo
Oogur: Dhis oo Raadso URL-yadaada Ololaha Falanqaynta Google
Istaraatiijiyadda Iibsiga ee Ku-saleysan Xisaabinta waa Mustaqbalka, iyo 'Groove' ayaa halkaan loogu talagalay